ထိပ်တန်း7✩ Who made the biggest contribution to the crypto industry?
အဘယ်သူသည် crypto စက်မှုလုပ်ငန်းဖို့အကြီးမားဆုံးအလှူငွေလုပ်? ထိပ်တန်း 7
Satoshi Nakamoto – Bitcoin, ပိတ်ပင်တားဆီးမှု Chain
the founder of Bitcoin and creator of unique Bitcoin client, အဆိုပါ crypto စက်မှုလုပ်ငန်းမှအကြီးမြတ်ဆုံးပံ့ပိုးမှုများကိုရာ၌ခန့်ထားပြီသူသြဇာအရှိဆုံးလူများ၏စာရင်းအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့. Quartz ၏မကြာသေးမီအကဲဖြတ်လက်အောက်တွင်, ယနေ့ခေတ် Satoshi Nakamoto ထံမှရှိစေခြင်းငှါ 980,000 သို့ 1 သန်း Bitcoin. ဒီဇင်ဘာလတွင်, Bitcoin ရဲ့အမည်မသိဖန်တီးသူခဲ့ကြလိမ့်မယ် $19.4 ဘီလီယံခန့်သို့မဟုတ်ကမ္ဘာ့ 44 ယောက်မြောက်အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြီ. Bitcoin ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေကြေးဖြစ်လာပါဘူးဆိုရင်, Satoshi Nakamoto ဖြစ်ကောင်းကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးလူတဖြစ်လိမ့်မယ်. သို့သော်သူကို Satoshi Nakamoto ၏ကလောင်အမည်အောက်မှာပုန်းအောင်းနေသည်နေဆဲလူသိများမဟုတ်ပါဘူး.
အဘယ်အရာကိုကြှနျုပျတို့သိကွပါအဖြူရောင်စက္ကူသောကွောငျ့ဖွစျသညျ “Bitcoin: တစ်ဦးက peer-to-peer အီလက်ထရောနစ်ငွေကြေးစနစ်” အောက်တိုဘာလအပေါ် Satoshi Nakamoto ၏ကလောင်အမည်အောက်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည် 31, 2008. ဤသည်အဖြူရောင်စက္ကူအီလက်ထရောနစ်ငွေသားများအပြည့်အဝကျတ် system ကိုဖော်ပြထား, မည်သည့်တတိယပါတီမလိုအပ်ခဲ့ဘူးရာ. အဆိုပါ P2P ဖောင်ဒေးရှင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ပရိုဖိုင်းကို Satoshi Nakamoto ဂျပန်တစ်ဦးအသက် 42 နှစ်အရွယ်နိုင်ငံသားကြောင်းပြောပါတယ်, နှင့် bitcoin.org ဖို့ link ကိုကိုထောက်ပံ့ပေး. အဆံုးမှာ 2010, Satoshi သူနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ထွက်ခွာကြောင်းကြေညာခဲ့သည် “သာ. အရေးကြီးသောအရာများကို။” ထိုအချိန်မှစ. Satoshi Nakamoto ကိုယ်စားမျှလှုပ်ရှားမှုရှိခဲ့. ဤသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သမျှသောသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ပါသည်; ကြွင်းသောအရာထင်ကြေးများနှင့် guesswork ဖြစ်ပါသည်.
နစ်ခ် Szabo – cryptography, Cryptocurrencies, စမတ်စာချုပ်များ
isafamous cryptography specialist andaresearcher in theoretical computer science. ဒါဟာပထမဦးဆုံး၏အယူအဆမိတ်ဆက်သောသူမူကားခဲ့သည် “စမတ်စာချုပ် ” တွင် 1996, တတိယပါတီများမှမှမသုံးပဲပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမျှဝေခွင့်ပြုထားတဲ့. တွင် 1998, Szabo ဖြန့်ကျတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများအတွက်ယန္တရားဒီဇိုင်းကကိုခေါ် “နည်းနည်းကိုရွှေ။” ဒါဟာ crypto စျေးကွက်၏အများအပြားပါဝင်သူများကသူ့ကို Satoshi Nakamoto ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး.
Szabo SegWit2x ရန်သူ၏ဆန့်ကျင်ကြောင်းကြေငြာ, နောက်ဆုံးဆောင်းဦးရာသီဟာ Bitcoin ကွန်ယက်တွင်ကျင်းပမည့်ဖြစ်ခဲ့သည်ရာ. သူ Bitcoin ကွန်ယက်၏မာလမ်းဆုံလမ်းခွတွင်ဖော်ပြထား, Bitcoin ငွေ, အဖြစ် “ဗဟို SOCKS ရုပ်သေး။”
ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလက, Szabo နှင့်သုတေသီ Elaine OU ရေဒီယိုအချက်ပြလှိုင်းကိုကျော် Bitcoin အရောင်းအပေးပို့ခြင်းတစ်အလုပ်လုပ်နည်းလမ်းကိုမိတ်ဆက်. ဤနည်းလမ်းကို firewalls အအလားအလာတိုက်ခိုက်မှုကနေကွန်ယက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့တစ်လမ်းအဖြစ် San Francisco မှာချိန်ခွင် Bitcoin ညီလာခံမှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်, ကွန်ယက်ကို gateway များ, ပြည်နယ်များသို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်အသုံးပြုသောနိုင်ကျတ်ကွန်ရက်များထိန်းချုပ်ရန်သို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းများ.
ရော်ဂျာကြည့်ရန် – Bitcoin.com
အများအားဖြင့်ပထမဦးဆုံး Bitcoin သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ဦးအဖြစ်လူသိများသည်, a.k.a. ယရှေုသညျ Bitcoin, Ver အဖြစ်အစောပိုင်းကာလ၌ရှိသကဲ့သို့ Bitcoin ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစတင်ကတည်းကအံ့သြစရာအရာမဟုတ်ပါဘူး 2011. ဒါဟာ Ver ပင် crypto ကမ္ဘာ၏စံချိန်စံညွှန်းအားဖြင့်အလွန်ထူးခြားသောလူကိုကြောင်းသတိပြုရကျိုးနပ်သည်. တွင် 1999, လေ့လာမှု၏တစ်နှစ်အကြာတွင်, သူကပုဂ္ဂိုလ်ရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပို့ချ၏မျက်နှာသာအတွက် De Anza ကောလိပ်မှထွက်ကျဆင်းသွား. တွင် 2005, သူ firecrackers ရောင်းချဘို့ထောင်ထဲမှာဆယ်လချမှတ်ခံခဲ့ရသည် (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တရားမဝင်) ebay မှာ. တွင် 2006, ရော်ဂျာဂျပန်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားစွန့်လွှတ်. တွင် 2012, သူက non-အမြတ်အဖွဲ့အစည်းကိုတည်ထောင်သူတဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်, Bitcoin Foundation က, ထို "စံရည်ရွယ်, ကာကွယ်သည်, နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသုံးစွဲသူအကျိုးအတွက် Bitcoin cryptographic ပိုက်ဆံ၏အသုံးပြုမှုကိုမြှင့်တင်ရန်။ "အခုဆိုရင် Ver cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်ဝန်ဆောင်မှုတာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်, Bitcoin.com
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကျော်, ရော်ဂျာ Ver ၏နာမကိုထပ်တလဲလဲကြောင့်အသစ်တခု cryptocurrency ၏နိဒါန်းမှမီဒီယာ၌ထငျရှား, Bitcoin ငွေ, အရာအခုသူသိပ်ထောက်ခံပါတယ်. သူ့ရဲ့အမြင်ကိုအလိုအရ, Bitcoin ငွေတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် “စစ်မှန်တဲ့ Bitcoin” ကြောင်း Satoshi Nakamoto များ၏တန်ဖိုးများကိုထောကျပံ့.
ချာလီ Lee က – Litecoin
ခေါင်းစဉ်အဘို့ဒုတိယလူကြိုက်အများဆုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ပါသည် “စစ်မှန်တဲ့” Satoshi Nakamoto. တွင် 2011, သူကပထမဦးဆုံး altcoins တစ်ဦးတီထွင်, Litecoin, သော Bitcoin ကွန်ယက်တွင်လမ်းဆုံလမ်းခွ၏ရလဒ်အဖြစ်ထင်ရှားပေါ်ထွန်း. ပြည်သူ့ Litecoin ဖြစ်မည်အကြောင်းခန့်မှန်းပြောဆိုချက်များဖြစ်ကြောင်း “Bitcoin ၏ရွှေမှငွေ။” တွင် 2013, Lee က Coinbase မှာနည်းပညာဆိုင်ရာဒါရိုက်တာ၏အနေအထားကိုချီ, အဓိက cryptocurrency ပလက်ဖောင်း. ဒါပေမယ့်အတွက် 2017, သူ Litecoin မြှင့်တင်ရေးကိုအာရုံစိုက်ဖို့ကုမ္ပဏီစွန့်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်.
ယခုနှစ်ကျော်, အဆိုပါ cryptocurrency မှုနှုန်းထက်ပိုဆယ်ဆအားဖြင့်ကြီးပြင်း, ယနေ့အချိန်မှာရပ်တည် $255. ဒီဇင်ဘာလတွင်, ချာလီ Lee ကဘယ်သူမှစျေးနှုန်းအတက်အကျထိခိုက်သူ့ကိုစွပ်စွဲနိုင်အောင်သူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ Litecoins ရောင်းချခဲ့ဖူးကြောင်းကြေညာခဲ့သည်. သူဟာစီမံကိန်းစွန့်ခွာသွားမခံခဲ့ရခြင်းနှင့်ဤလုပ်ငန်းအားလုံးကိုသူ့အချိန်မွှုပျနှံဆက်လက်မယ်လို့အလေးပေး.
တိုနီ Weiss – BraveNewCoin
တစ်ဦး Bitcoin ကုန်သည်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့်တွင် JPMorgan Chase-ဖြစ်ပါတယ် crypto အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာလူသိများမှာထွ-ဒုတိယသမ္မတ. Weiss ကတည်းကထုမှနည်းပညာမြှင့်တင်ရန်ပထမဦးဆုံး blockchain သာသနာပြုအရာ၌တဦးအဖြစ်ယူဆထားသည် 2013. သူဟာအောင်မြင်တဲ့ဘလော့ဂ်ရှိပါတယ်, podcast တခုကို, အဆိုပါ Youtube ကို Channel ကို, ထက်ပြီးပို 80,000 Twitter ပေါ်တွင်နောက်လိုက်. CoinTelegraph မကြာခဏကသူ့မှတ်ချက်များနှင့်ပစ္စည်းများထုတ်ဝေ. ထို့အပြင်, တွင် 2014, Weiss BraveNewCoin မှာသုတေသန၏ဦးခေါငျးဖြစ်လာခဲ့သည်.
အဆိုပါ Weiss အဆိုအရ’ နောက်ဆုံးစက်တင်ဘာလထဲမှာထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်နှင့် Bitcoin အသုံးပြုသူများသည်၏အဆတိုးတကျမှုအပျေါအခွခေံကြောင်းသုတေသန, အဆုံး 2018, Bitcoin စျေးနှုန်းကျော်ဖြတ်ဖို့အလားအလာရှိပါတယ် $100,000 အမှတ်. ယခင်က, Weiss ကြောင်းဖော်ပြထား, အဆုံး 2017, Bitcoin ယင်းကိုဖြတ်ကျော်မယ်လို့ $15,000 အမှတ်, ငါတို့ဒီဇင်ဘာလအပေါ်စောငျ့ရှောကျခဲ့ဘူး 17. Weiss ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဟာ ICO မှတဆင့်ရန်ပုံငွေ၏ခေတ်သစ်ယန္တရားများဝေဖန်, အဖြစ် 90% ICO စီမံကိန်းများဖြစ်ကြသည် “ရုံဖောင်းပွ။”
အကြီးဆုံး cryptocurrency စီမံကိန်းများကိုတစ်ဦး၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူဖြစ်ပြီး, Ethereum, နှင့်၎င်း၏ဇာတိ cryptocurrency, အမည်ရအီ. တွင် 2013, Buterin cryptocurrency အဖြူရောင်စက္ကူပု blockchain ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ, အသုံးပြုသူများသည်အများအပြားထူးခြားသောအခွင့်အလမ်းများနှင့်အတူသူတို့ကိုပေးစမတ်စာချုပ်များကိုသုံးနိုင်သည်ဘယ်မှာ.
ယခုနှစ်ရှေ့ဦးစွာ မှစ., အဆိုပါအီနှုန်းကိုတိုးမြှင့် 57 ကြိမ်, နှင့် Buterin အမေရိကန် Forbes မဂ္ဂဇင်း၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး “30 အသက် 30 နှစ်အောက်။” ဘလွန်းဘာ့ဂ်၏စာရင်းထဲတွင် Buterin ပါဝင်သည် 50 သြဇာအရှိဆုံးလူ 2017, နှင့်ရုရှား Forbes မဂ္ဂဇင်း၏စာရင်းထဲတွင်သူ့ကိုထည့်သွင်း 100 ရာစုနှစ်၏သြဇာအရှိဆုံးရုရှား.
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က, Buterin သည့်စိန့်စဉ်အတွင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ပူတင်နှင့်အတူတွေ့ဆုံခဲ့ရသူအနည်းလုပ်ငန်းရှင်များတဦးဖြစ်လာခဲ့သည်. ပီတာစဘတ်ဖိုရမ်. အဆိုပါစကားပြောဆိုမှုများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသကြသည်မဟုတ်, ဒါပေမဲ့ဒီအစည်းအဝေးအပြီး, ရုရှားအာဏာပိုင်များ blockchain နည်းပညာနှင့် cryptocurrencies အပေါ်ဦး-အလှည့်လုပ်, အာရုံစူးစိုက်မှုကိုခံထိုက်သောသူတစ်ဦးစိတ်ဝင်စားဖို့နည်းပညာ blockchain တောင်းဆို. ထို့အပြင်, က Ethereum Vnesheconombank နှင့်အတူပူးတွဲစီမံကိန်းအားဖြန့်ချိမယ့်ခဲ့သည်သိရဖြစ်လာခဲ့သည် (ဘ်ဆိုဒ်); Sberbank အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းအတွက်လုပ်ငန်း Ethereum မဟာမိတ်ပူးပေါင်း (Eee), ပြီးသားထက်ပိုမိုပါဝငျသညျအရာ 200 ကုမ္ပဏီများမှ, နှင့်ဓနသဟာယမှာပထမဦးဆုံးရုရှားဘဏ်ဖြစ်လာခဲ့သည်.
ဂါဗင်ဝုဒ် – parity Technologies က, အစက်အပြောက်
Ethereum မှာပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့်ယခင် CTO ဖြစ်ပါသည်, တစ်ဦးအမှန်တကယ် running အစီအစဉ်ကိုသို့ Buterin ကရေးသားကနဦး Ethereum အဖြူရောင်စက္ကူအသွင်ပြောင်းတဲ့သူ. အခုတော့ Wood ကကုမ္ပဏီ parity Technologies ကအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့, အရာ blockchain ကွန်ရက်များအဘို့ software ကိုဖွံ့ဖြိုး. သူလည်းတစ်ဦး startup Polkadot ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူဖြစ်ပြီး, အရာပုဂ္ဂလိကနှင့်အများပြည်သူ blockchains ၏ကြီးမြတ်သောလိုက်ဖက်တဲ့များအတွက်ကွန်ယက်ကိုတိုးချဲ့နိုင်စွမ်းတိုးတက်အောင်ခွင့်ပြုလတံ့သော protocol ကိုဖွံ့ဖြိုး.
အဆိုပါ 2017 တစ်နှစ် Wood ကအဘို့အခက်ခဲဖြစ်သက်သေပြ. ယခုနှစ်ရဲ့အစမှာ, ကုမ္ပဏီအောင်မြင်စွာ parity ဖြန့်ချိ 1.5, တစ်ဦး updated Ethereum ကွန်ယက်ကို client ကို. သို့သော်အကောင်းတစ်ဦးက start ပြီးနောက်, ယခုနှစ်အလယ်၌, parity Technologies ကပြင်းထန်အခက်အခဲများရင်ဆိုင်ခဲ့.
နောက်ဆုံးဇူလိုင်လ, အဆိုပါပိုက်ဆံအိတ် hacked ခဲ့ကြသည်. အဆိုပါဟက်ကာ multisignature နှင့်အတူစာချုပ်ထဲမှာ bug ကိုတွေ့ရှိရ, သူတို့ကိုခိုးယူဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ရာ 153,000 အီ (အကွောငျး $32 သန်းအချိန်တွင်). parity ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့စမတ်စာချုပ်တစ်ခု updated version ကိုဖြန့်ချိ. မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, အခြားအရေးပါ bug ကို, ပိုက်ဆံအိတ်၏ယုတ္တိဗေဒစီမံခန့်ခွဲသောစာကြည့်တိုက်များတွင်နေထိုင်ရသော, နိုဝင်ဘာလထဲမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်. аပရိုဂရမ်ရဲ့အမှား၏ရလဒ်အဖြစ်, လှည့်ပတ် $152 သန်း parity အသုံးပြုသူများသည်အတွက်အေးခဲခဲ့သည်’ အကောင့်.
Wood ကအလိုအရ, အားလုံးအသုံးပြုသူများသည်’ ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်သိမ်းထားတဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလုံးဝဘေးကင်းလုံခြုံများမှာ, ဒါပေမယ့် t ကိုကွန်ယက်မှသူတို့ကိုဆွဲထုတ်ဖို့သေးမဖြစ်နိုင်ပါ. ကို frozen ပိုင်ဆိုင်မှုအကြားခဲ့သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်တန်ဖိုးရှိဒါဟာဖြစ်ပါသည် $98 တစ်ဦး ICO ကနေတဆင့် Polkadot startup အားဖြင့်ကြီးပြင်းလာသန်း.
Satoshi Nakamoto ၏နာမကိုနောက်ကွယ်မှအမှန်တကယ်သူသည်၏လူကြိုက်အများဆုံးဗားရှင်းကိုအောက်ပါနေကြတယ်:
နစ်ခ် Szabo - ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၏လယ်ပြင်တွင်တစ်ဦးသိပ္ပံပညာရှင်, cryptography ကို, နှင့်ဥပဒေ, အဖြစ်ကောင်းစွာတဲ့စမတ်ကန်ထရိုက်၏သုတေသီနှင့် cryptocurrency အဖြစ်.
ချာလီ Lee က - Litecoin ၏ဖန်တီးသူ.
Neal ရှငျဘုရငျ, ဗလာဒီမာ Oksman, နှင့်ချားလ်စ် Bry - ထိုမူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာများစာရေးဆရာများ, ကိုခေါ် “encryption ကိုသော့အသစ်ပြောင်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူး။”
မိုက်ကယ် Klare - Dublin ၏ကောလိပ်အတွက် cryptography ကိုတစ်ဦးဘွဲ့ရ.
Hal Finney - တစ်ဦး cryptography ကိုအထူးကု.
Dorian Nakamoto - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသား (ကယ်လီဖိုးနီးယား) ဂျပန်မူရင်း.
Craig Wright - သြစတြေးလျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်.
Elon Musk - တစ်ဦးကျော်ကြားဘီလျံနာ, တက်စလာနှင့် Space X ကို၏ဦးခေါင်းကို, နှင့် SolarCity မှာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး
သူတို့အားလုံး, မှတပါး Craig Wright, သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံး cryptocurrency ပိုင်ငြင်းပယ်. ဖြစ်ကောင်း, Nakamoto ရရှိထားသူကွောငျ့အက crypto စျေးကွက်အတွက်သတင်းတစ်ခုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အပိုင်းအစဖြစ်ပါသည် 5% အားလုံး Bitcoin ၏. ဒါကြောင့်, Nakamoto, ဆန္ဒရှိလျှင်, သိသိသာသာ Bitcoin မှုနှုန်းနှင့် crypto ဈေးကွက်ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့.
Blockchain သတင်းများဇန်နဝါရီ72018
Mark Zuckerberg ဟာပြန်လည် ...
Blockchain သတင်းများ 10 ဇန္နဝါရီလ 2018
Metatron CR ဖြန့်ချိ ...
Previous Post:Blockchain သတင်းများ9ဇန္နဝါရီလ 2018
Next Post:Blockchain သတင်းများ 10 ဇန္နဝါရီလ 2018